Penilizer jelqing deivce – MM Online Shopping
Penilizer ကိုအသုံးပြုပီး ပိုကြီး ၊ပိုထွားသော လိင်တန်အရွယ်အစားကို အရယူလိုက်ပါ လိင်တန်ကို နှိပ်နယ်ပေးပီး သဘာဝအတိုင်းကြီးမားရှည်​လျှားလာ​စေမဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ ​ဘေ်​ဒါ​တွေအတွက်​ penilizer လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ နိုင်​ငံတကာမှာလူကြိုက်​များပီး သုံးစွဲသူတိုင်းရဲ့ ​ထောက်​ခံချက်​ကို အပြည့်​အ၀ရရှိထားတဲ့ ပစ္စည်း​လေးပါ You tube တွင်​လည်း သုံးစွဲသူများစွာရဲ့ လက်​​တွေ့အသုံးပြုပီး ထိ​ရောက်​မှု ရှိတယ်​ ဆိုတာကို ပြသထားတဲ့ video များစွားကို လည်း​တွေ့မြင်​ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​ Penilizer ဟာ လူတွေ့နဲ့ ပစ္စည်းတွေ့ကို သိပ္ပံနည်းကျ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် အကျိုးသက်ရောက်မူကောင်းအောင် ပုံစံထုတ်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်​ပါတယ် ဒါကြာင့် လက်ရဲ့လှုပ်ရှားမူ အကြိမ်အရေအတွက်နည်းနည်းနဲ့ ထိရောက်မူအများဆုံးကို ရစေပြီး အသုံးပြုသူကို သက်တောင့် သက်သာ ရှိစေပါတယ် လိင်တန်ရဲ့အရွယ်အစားကို လျှင်​မြန်​စွာ တိုးတက်စေပီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုကောင်းမွန်​​စေပါတယ်​ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည့်မူရှိစေပါတယ်​. စီလီကွန်နည်းပညာအသစ်ဖြင့် အသုံးပြုထားခြင်း ​ကြောင့်​. နှိပ်နယ်မူကို တိုးမြင့်ပေးပြီး လိင်တန်အရေပြားအတွက်လည်း စိတ်ချစေပါတယ် ပစ္စည်းကို သန့်ရှင်းရေး ပြုရလွယ်ကူစေပါတယ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတွင် အသုံးပြုသော စံချိန်များနှင့် ကိုက်ညီသော စီလီကွန်ကို ရွှေးချယ်အသုံးပြုထားပါတယ် .
အသုံးပြုနည်း လိင်တန်ကို ချောဆီနှင့် ပွတ်သပ် သုတ်လိမ်းလိုက်ပါ ရေဓာတ်ကို အခြေခံသော ချောဆီကိုသာ အသုံးပြုပါ
Penilizer ရှိ စီလီကွန်​ကို ​ချောဆီအနည်းငယ်​ သုတ်​လိမ်းပါ
ထို့​နောက်​ ပစ္စည်းကို လိင်တန်အရင်းကို ကပ်လိုက်ပါ ။
လိင်တန်အရင်းကနေ အောက်ကို တဖြောင့်တည်းဖိပြီး ဆွဲဆန့်လိုက်ပါ ။
နှိပ်နယ်ခြင်းကို လိင်တန် အောက် ၊ဘယ်၊ ညာ ၊ အပေါ် ကို တလှည့်စီ ဆွဲဆန့်လိုက်ပါ
ကိရိယာကို အလျားလိုက် နှင့် အောက် ၊ဘယ်၊ ညာ ၊အပေါ် ၁၀ ခါစီ ဖိပြီး ဆွဲဆန့်ပါ
ကိရိယာကို ထောင့်လိုက်နှင့် အောက် ၊ဘယ်၊ ညာ ၊အပေါ် ၁၀ ခါစီ ဖိပြီး ဆွဲဆန့်ပါ
အသုံးပြုပြီး အချိန် ကိရိယာကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ ။
ဆွဲရာတွင် လက်ကို အပေါ်သို့ဆွဲပါ ညစ်ပြီး ဆွဲပေးပါ
လိင်တန်ကို မကွေးစေပါနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ဆွဲပါ
မလေ့ကျင့်မီ လိင်တန်ကို ရေနွေး(ခံနိုင်လောက်သောပမာဏဖြင့်စွတ်ထားသော အ၀တ်စဖြင့် ၅ မိနစ်လောက် ပတ်ထားပေးပါ
၊ ပြီးမှာသာ ချောဆီဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးပါ
Gel တွေ့က လိင်တန်ကို ကြီးရှည်ဖို့အတွက် အထောက်အကူမပြုပါ ဒါပေမယ် ပြောင်းဆွဲရာတွင် အဆင်ပြေချောမွှေစေပြီး သက်​​တောင့်​သက်​သာရှိ​စေပါတယ
လေ့ကျင့်​နေရင်း ​ချောဆီ ခြောက်သွားပါက ချောဆီထပ်​သုံးပေးပါ ပထမ ၁ပတ်တွင် လေ့ကျင့်ရမယ် အကြိမ်အရေအတွက်အတိုင်း အတိအကျ လေ့ကျင့်ပေးပါ လေ့ကျင့်ပြီးရင်လည်း လိင်တန်ကို ရေနွေး(ခံနိုင်လောက်သောပမာဏဖြင့်စွတ်ထားသော အ၀တ်စဖြင့် ၅ မိနစ်လောက် ပတ်ထားပေးပါ ပြီးမှာ အကြိမ်ရည် ကို တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပေးပါ
Be the first to review “Penilizer jelqing deivce” Cancel reply